भारतले नाकाबन्दी किन लगाएको थियो ? बाबुराम भट्टराईको खुलासा
प्रकासित मिति : २४ भाद्र २०७५, आईतवार प्रकासित समय : ०८:२२
काठमाडौं भदाै २४। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराख्न भारतीय दबाब आएको खुलासा गरेका छन् ।
त्यसबखत संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले भारतीय संस्थापन पक्षका उच्चस्तरका व्यक्तिबाटै त्यस्तो सन्देश आएको बताएका हुन् ।
फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज ९आईएल एन्ड एफएस० ले तयार पारेको थियो । सोही कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने भारतीय दबाब रहेको भट्टराईको संकेत थियो । भारतीय चाहनाविपरीत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
संविधान जारी हुनुअघि भारत भ्रमण गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा ९तत्कालीन माओवादी केन्द्र० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संविधानमा भारतको असन्तुष्टि खुलासा गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘दुई दिनअघि नै संविधानमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । हस्ताक्षर भइसकेपछि यहाँ आएर असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ थिएन’, भट्टराईले भने ।
नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले पुस्तकमा भनेजस्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान जारी भएको नभई ५ वर्ष ८ महिना लगाएर आएको बताए । ‘यो संविधान पूर्ण सहमति र प्रक्रियाका साथ जारी भएको हो, हतार गरेर आएको होइन’ नेम्वाङको भनाई थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट।
उपभोक्तालाई कुहिएको चामल बिक्री गर्ने,खाद्य कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकार किन मौन?
काठमाडौं । उपभोक्तालाई झुक्यार कुहिएकोे बास्मती चामल बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई
राष्ट्रियसभाको चुनाव प्रक्रिया पुस १७ देखि सुरु हुने
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले रिक्त हुन लागेका राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यकोे पूर्तिका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक